Luis Suarez oo Jamaahiirta Kooxdiisa Barcelona ku war-geliyey xilliga uu garoomada dib ugu soo laabanayo – Gool FM
Luis Suarez oo Jamaahiirta Kooxdiisa Barcelona ku war-geliyey xilliga uu garoomada dib ugu soo laabanayo
(Barcelona) 22 Mar 2020. Laacibka kooxda Barcelona ee Luis Suarez ayaa ka warramay xaaladdiisa dhaawac, isagoo tilmaamay inuu diyaar noqon karo marka kooxdiisa ay garoonkaddib u soo gasho.
Weeraryahanka reer Uruguay ayaa garoomada dhaawac kaga maqnaa tan iyo bishii Janaayo kaddib dhaawac ka soo gaaray jilibka, balse waxaa la rajeynaya inuu soo kabsado marka horyaalka La Liga dib loo billaabo bisha May, sida uu hadda qorsheynayo madaxweynaha horyaalkaas ee Javier Tepas.
“Waxay ku xiran tahay suuro-galnimada sida aan u maareyno, isbedelna wuu socday, balse soo laabashadeyda xilli hore inay tahay waa mid iska cad,” ayuu Suarez u sheegay Referi.
“Dhaqtarkeyga waxa uu ii sheegayay inaan si wacan ku socdo, taasna waxay i gelisay rajo fiican oo aan dhaqso ku ciyaari karo.
“Farqiga hadda ayaa ah marka ay kooxda soo laabto, waxaan diyaar u noqon doonaa inaan ciyaaro.” ayuu hadalkiisa ku sii daray Suarez.
Suarez ayaa qalliin jilibka ah maray bishii Janaayo, waxaana uu aqbalay inuu iska xalliyo dhibaatadii jilibka ee muddada fog uu la tacaalayay.
Xiddiggii hore ee Liverpool inuu kulamo badan u ciyaaro xilli ciyaareedkan kooxdiisa Barcelona waxaa ka caawinaya hakadka la geliyay horyaalka La Liga si loo yareeyo xaddiga faafitaanka caabuqa coronavirus.
Kalidou Koulibaly oo ku war-galiyay madaxda sare ee Kooxda Napoli inuu doonayo inuu tago... (Halkee ku sii jeedaa?)